SENTAfrica and LIVINGWAY IMFUNDO » Ubumfihlo kanye Cookie Inqubomgomo
Ubumfihlo kanye Cookie Inqubomgomo
KWATHUNYELWA Afrika izibophezele ekuqinisekiseni ukuthi ubumfihlo bakho livikelwe. Okufanele sizibuze ukuba usinike imininingwane ethile ngazo wena bungabonakala uma usebenzisa le website, ke ungaqiniseka ukuthi kuyobe kuphela sisetshenziswe ngokuhambisana nalesi sitatimende ubumfihlo.
KWATHUNYELWA Afrika ingase ishintshe le nqubomgomo ngezikhathi ezithile ngoku kubuyekezwa khasi. Kufanele abheke leli khasi ngezikhathi ezithile ukuqinisekisa ukuthi niyajabula nanoma izinguquko. Le nqubomgomo ngempumelelo kusuka April 2014.
Kungenzeka siqoqe ulwazi olulandelayo:
Xhumana Ukwaziswa kubandakanya ikheli imeyili.
Imininingwane emayelana ezifana ikhodi yeposi.
Olunye ulwazi olufanele kwamakhasimende, izingcaphuno njll.
Lokho esikwenzayo ngolwazi sihlangana
Sidinga lolu lwazi ukuze uqonde izidingo zakho bese ikunikeze isevisi kangcono, futhi ikakhulukazi ngezizathu ezilandelayo:
Lokugcina imininingwane yangaphakathi
Kungenzeka sisebenzise imininingwane ngcono imikhiqizo insizakalo yethu.
Kungenzeka ngesikhathi thumela ama-imeyili akhangisayo mayelana nemikhiqizo emisha noma Izipesheli.
Sizibophezele ekuqinisekiseni ukuthi ulwazi lwakho kuyinto evikelekile. Ukuze avimbele ukufinyelela okungagunyaziwe noma ukudalula, siye ibekwe ngokomzimba efanelekile, Izinqubo ngogesi nokuphathwa ukulonda futhi belondekile ulwazi thina ukuqoqa inthanethi.
Ikhukhi yifayela encane ababeke hard drive yekhompyutha yakho, ikhukhi kusiza hlolisisa web traffic noma uvumela izicelo web ukuba baphendule nawe uwedwa. Isicelo web kungaba livumelanise ukusebenza nezidingo zakho, azithandayo nangazithandi ngokubuthana nokukhumbula ilwazi mayelana okuthandayo.
Sisebenzisa traffic lokungena cookies ukubona ukuthi yimaphi amakhasi esetshenziswe. Lokhu kuyasisiza sihlaziye idatha mayelana lewebhu traffic futhi sithuthukise iwebsite yethu ukuze livumelanise it nezidingo zamakhasimende. We kuphela sebenzisa lolu lwazi for izibalo analysis nezinhloso ke ukwaziswa esuswa ohlelweni.
Jikelele, cookies asisiza ukuqonde ngezinga website kangcono ngokunika amandla ukuthi siqaphe yimiphi amakhasi ozithola ziwusizo futhi yiziphi ungathandi. Ikhukhi neze kusinika ukufinyelela ikhompyutha yakho noma yiluphi ulwazi ngawe, ngaphandle idatha okhetha ukwabelana nathi.
Ungakhetha ukwamukela noma ukwala ama-cookies. Web browsers amaningi ukwamukela cookies, kodwa ngokuvamile ungakwazi ukuguqula browser yakho kuze wale cookies uma uthanda. Lokhu bangase iyakuvimbela ngokugcwele amawebhusayithi ethu.
Asikho olawula ukulethwa cookies ezivela abahlinzeka ezifana Google Analytics and YouTube. Noma iyiphi imibono noma imibuzo ongase ube kumele ivuswe nge uMsunguli lezo cookies.
Ukusebenzisa kwakho le sayithi lithathwe njengoba avuma kufakwa cookies kwi system yakho. Uma ungavumelani, sicela benze okulandelayo (ukusekelwa lobuchwepheshe sicela uxhumane IT wakho ukwesekwa uchwepheshe.)
Vala le webhusayithi
Sebenzisa amathuluzi iwebhu lakho isiphequluli esithi "susa cache yakho"
Niyeke isiphequluli sakho
Ungakwazi ke ukhetha ukuvumela amakhukhi kusuka kulolu website nge izilungiselelo isiphequluli
Uma uqhubeka ngaphandle kokushintsha izilungiselelo zakho, sizobe ucabange ukuthi niyajabula ukuthola yonke cookies kusuka website yethu.
Ukuxhumana nezinye amawebhusayithi
Website yethu ingaba links kwamanye amawebhusayithi ezithakazelisayo. Nokho, once usebenzise lezi links ukushiya indawo yethu, kufanele siphawule ukuthi singazi ube ukulawula ukuthi enye ingosi. Ngakho-ke, ngeke siphumelele obangela ukuvikelwa kanye nobumfihlo kwanoma yiluphi ulwazi olunikeza ngenkathi ngokuvakashela izingosi ezinjalo futhi sites ezinjalo hhayi alawulwa lokhu semfihlo. Kufanele siqaphe futhi sibheke isitatimende zangasese osebenza website ethintekayo.
Ukulawula imininingwane yakho
Uma uke bavumelana kithi besebenzisa imininingwane yakho ye ngqo zokumaketha, ungase ushintshe ingqondo yakho nganoma isiphi isikhathi ngokubhalela noma yokusithumela i-imeyili infthe@seNTafrica.org
Ngeke ukudayisa, ukusabalalisa noma ukuqasha imininingwane yakho kwabanye abantu ngaphandle uma lesithathu kudingwa umthetho ukuba wenze kanjalo.
Ungacela imininingwane imininingwane yomuntu thina sibambelele ngawe ngaphansi Data Protection Act 1998. Imali encane ingase ibe ekhokhwayo. Uma ungathanda ikhophi ulwazi olugcinwe kwi kuwe sicela imeyli info@senukwazirica.org
Uma ukholelwa ukuthi yiluphi ulwazi siphethe kuwe ayilungile noma akuphelele, sicela ubhalele noma i-imeyili nathi ngokushesha ekhelini elingenhla. Sizokwenza ngokushesha ulungisa yiluphi ulwazi kutholakala ukuthi ayilungile.